सर्वोच्चका पूर्व रजिष्टार डा. तिमिल्सिना भन्छन्, ‘रविको रिहाका लागि कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन’ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सर्वोच्चका पूर्व रजिष्टार डा. तिमिल्सिना भन्छन्, ‘रविको रिहाका लागि कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन’
सर्वाेच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले न्यायालयमाथि राजनीति हावी हुन थालेको धारणा राख्दै अपराधलाई नै राजनीतिकरण गर्ने डरलाग्दो प्रवृति नेपालमा बढेकोले स्वतन्त्र न्याय धरापमा परेको पनि बताएका छन् । न्यूज २४ को नियमित प्रस्तुति ‘छ प्रश्न’ कार्यक्रममा कुरा गर्दै डा. तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई न्याय दिने बाटो फराकिलो भएपनि उनको मु*द्दा ष*डयन्त्रको धरापमा पर्ने आशंका ब्यक्त गरेका छन् । उनले रवि लामिछानेलाई रिहाई गर्न धेरै ठूलो बहस आवश्यक नरहेको समेत दावी गरेका छन् ।
कानुनको शासन नरहे लोकतन्त्र धर्मराउने प्रष्ट पार्दै पूर्व रजिष्टार तिमिल्सिनाले भने, ‘देशमा लोकतन्त्र छ भन्दैमा नहुँदो रहेछ, लोकतान्त्रिक आचरण आवश्यक देखियो, त्यसमाथि न्यायको बारेमा पनि न्याय गरेर हुँदैन न्याय गरेको देखिनु पर्ने देखियो ।’ उनले अगाडि भने, ‘ अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ , अदालतले कुनै हल्लाको भरमा, भीडको भरमा अथवा कुनै सोसल मिडियामा आएको भिडियोको भरमा, अथवा कसैको कानेखुसी या विचारको आधारमा निर्णय गर्दैन । अदालतले रुल अफ ल को भरमा निर्णय गर्छ । ’ कहिले समाज कानुन भन्दा अगाडि हुने त कहिले कहिले कानुन समाज भन्दा अगाडि हुने भएकाले यसैलाइ कानुनद्वारा सामाजिक परिवर्तन भनिने गरेको उनको भनाइ छ ।